सोनाक्षी सिन्हा सेक्सबारे किन कुरा गर्न चाहन्छिन् ? | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ६, २०७६ chat_bubble_outline0
Photo: FACEBOOK/SONAKSHI SINHA
दबंग फिल्मबाट बलिउडमा कदम राख्ने सोनाक्षी सिन्हा पहिलो पटक सेक्स कमेडी फिल्म ‘खानदानी शफाखाना’ मा देखिनेछिन् ।
उक्त ‘शफाखाना’ मा मानिसहरु यौनसम्बन्धि समस्याको उपचार गर्न आउँछन् ।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा सोनाक्षीले भनिन्, ‘म सोच्थेँ कि सेक्सजस्तो विषय छ भने म के गर्ने होला ? म सोनाक्षी सिन्हा पारिवारिक फिल्म मात्र खेल्छु । मेरो आमा–बुवाले के भन्नुहोला ? जब मैले फिल्मको स्क्रिप्ट पढेँ तब मलाई यो फिल्ममा अभिनय गर्न भित्रदेखि नै रुची जाग्यो । यो एउटा यस्तो फिल्म हो जसले आजको समय बताउँछ ।’
सोनाक्षी मान्छिन् कि भारतमा आज पनि यौनसम्बन्धि कुरा गर्न कठिन छ । यसबारे मानिसहरु कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् जबकी कुरा गर्दा नराम्रो सोच्नु हुँदैन ।
‘जब रुघा–खोकी, ज्वारोका लागि तपाईं डाक्टरकोमा जानुहुन्छ भने यौन सम्बन्धि रोगबारे किन कुरा गर्नु हुँदैन ? यो जागरुकता ल्याउन आवश्यक छ ।’
कहिले पनि सेक्सबारे आमा–बुवासँग कुरा नगरेको व्यक्तिमा आफू पनि पर्ने सोनाक्षीले बताइन् । स्कूल र कलेजका दिनमा साथीहरुमार्फत् यसबारे जानकारी पाएको बताइन् ।
उनी फिल्मकी निर्देशक शिल्पी दासगुप्तालाई श्रेय दिँदै भन्छिन्, ‘एक महिला निर्देशक भएको नाताले उनले गम्भीर तरिकाले यो विषयलाई सम्हालेकी छिन् जो एक पुरुष निर्देशकले गर्न सक्दैनथे ।’